သြစတေးလျှဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်
သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဂျူလိုင်လ ၄ရက် ၇:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. သြဇီဗဟိုဘဏ် အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့သည့် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ၂၀၁၆ သြဂုတ်လပိုင်းကသာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အပြောင်းအလဲလုပ်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်. ထိုအချိန်ကာလနောက်ပိုင်းမှာတော့ အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲမလုပ်ဘဲ ယခင်နှုန်းထား ၁.၅၀%အတိုင်းသာ မပြောင်းမလဲ ထားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါသည်. ယခုအကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွင် မူဝါဒအပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင် မလုပ်နိုင်ကို ဈေးကွက်က စိတ်ဝင်တစားနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်. အပြောင်းအလဲလုပ်ခဲ့ပါက AUDတန်ဖိုး မြင့်တက်နိုင်ပြီး မပြောင်းဘဲ ယခင်အတိုးနှုန်းအတိုင်း ထားရှိခဲ့ပါက AUDတန်ဖိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသည်.